Munaasabadda Maalinta Calanka Soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay Muqdisho(Daawo Sawiro) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Munaasabadda Maalinta Calanka Soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay Muqdisho(Daawo Sawiro)
Munaasabadda Maalinta Calanka Soomaaliyeed oo xalay lagu qabtay Muqdisho(Daawo Sawiro)
Munaasabad lagu maamuusayay Maalinta Calanka Soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo Mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo dhalinyaro ay ka qeyb galeen munaasabadan.
Munaasabaddan oo ay soo qaban qaabisay Wasiirka Dhalinyarada iyo isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa ka warbixisay heerarkii uu soo maray Taariikha Calanka Soomaaliyeed, iyadoo xustay in saddex calan uu soo maray xilligii gumeysiga.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in 13 dhalinyaro ay u soo halgameen xoriyadda maanta la heysto iyo qiimaha calanka uu leeyaha.
Sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada ayaa soo bandhigtay magacyada 9 xubnood oo noqon doona Golaha KMG ah oo dhalinyaradda Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Wiil naafo ah.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo munaasbada ka hadlay ayaa sheegay in halgan dheer loo soo maray sidii calan Soomaaliyeed loo heli lahaa, isagoo u duceeyay dhalinyaradii halganka u soo galay xornimada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa hambalyo u diray 63 guuradii ka soo wareegatay markii la taagay calanka Soomaaliyeed, isagoo caddeeyay in calanka Soomaaliya uu yahay astaanta qaranka.
Munaasabadan maalinta Calanka Soomaaliyeed ee 12 October ayaa ah maalin la xuso,waxaana munaasabadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ay aheyd mid ka duwan kuwii horay uga dhacay dalka.
Previous articleCiidanka Xasilinta oo hawlgal ka fuliyay meel ka baxsan Magaalada Muqdisho
Next articleShabaab ayaa saaka waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ayaa ugu baaqay Madaxweynaha inuu soo kala dhexgalo barlamaanka & xukuumada
Beesha caalamka oo walaac ka muujisay xiisadaha Siyaasadeed ee soomaaliya
Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska oo war ka soo saaray Ciidamada la wareegay xarunta Barlamaanka